Sein Lyan - စိ န် လျှံ: ခုတလော
Writer Sein Lyan Time 3:31 pm
တတိယရပါတယ်။ ပထမက နန်းညီ ဒုတိယက မကြေးမုံ ခု တတိယက ဖိုးစိန်ပါ။
Z ကိုကြော်ငြာတယ်။း)
မစားတတ်အောင်ဖျက်ဆီး ပေးခဲ့တာ သူတို့ပေါ့
ရောက်တဲ့ အရပ်မှာ ပျော်အောင်နေတော့ ကလေးရေ..
ဘ၀ဆိုတာ ကိုယ်ရေးလို့မရတဲ့ ကိုယ်ပိုင်စာအုပ်တစ်အုပ်
နံပါတ်အားဖြင့် ၅း)
အကို့ညီလေး အမြန်ဆုံး နေကောင်းကျန်းမာဖို့လည်း ဆုတောင်းပေးပါတယ် ..
ဘာပြောရမှန်းတောင်မတိတော့ဘူး တူပြောတွားတာက စုံနေတာပဲ....။
လောကကြီးကို လောလောပြီးသာ က ပစ်လိုက်တော့
လယ်နီချင်းဖြစ်မှပဲ ရေနွေကြမ်းဝိုင်းမှာ ဆက်ပြောတော့ မယ်..။
နေခြည့်ကွန်းမန့်ကို ၁၀၀နဲ့ မြှောက်လိုက်နော်...
ကွန်းမန့်x ၁၀၀ = ကွန်းမန့်၁၀၀
ပေးခဲ့ပြီနော် ကွန်းမန့်တရာ... ဒါပဲ မပျောက်နဲ့
ရေးချလိုက်ပြီးရင်တော့ စိတ်ပေါ့သွားမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်၊ မညစ်ပါနဲ့၊ လူတိုင်းလဲ တခါတခါ ဒီလို စိတ်ကုန်တဲ့ အချိန်တွေ ရှိကြတာပါ၊ အားပြန်တင်းလိုက်ပါဦး၊
တစ်ရာ ပြည့်အောင် တစ်နေ့တခါ လာရေးမယ်လေ
သယ်ရင်း က လေးဖြူလို့ သူ့ပရိတ်သက်ကို အကဲစမ်းလိုက်တာပဲ ကိုးကွ။
လေးဖြူ သူစမ်းလိုက်တဲ့ ပွဲ အောင်မြင်သွားသလို့
သယ်ရင်း စမ်းလိုက်တဲ့ အရာလေးလဲ
ဗေဒင် သွားမမေးနဲ့ သယ်ရင်း
စမ်းစရာ မလိုအောင် မင်းကို ချစ်ကြောင်း
ကိုယ်တောင် မအားတဲ့ ကြားကလာရတာကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့်
လောလောဆယ်တော့ သယ်ရင်း အရာရာ အာလုံး အဆင်ပြေပါစေလို့ပဲ စုတောင်းတောင်းပေးနေတယ်ကွာ။
ညီလေးလဲ အမြန်ဆုံး အကောင်းပကဓိအတိုင်း ပြန်ဖြစ်ပါစေကွာ။
နည်းတယ်များတယ် သဘောမထားနဲ့ သယ်ရင်းလာရင် မွေးနေ့လက်ဆောင်ပေးဖို့
သွားကြည့်ထားတယ်။ လာမမေးနဲ့ ပြောပြဘူး။
သတ်ချင်သတ်လိုက် ဟီးဟီး နောက်တာ ဟုတ်ဘူးနော် တကယ်ပြောတာ။
မနော်.. ရက်စက်တယ်..း(((
အဆင့်တွေပေးနေတာကို... မီး မသိရပါလားကွယ်.
အဲလိုမှန်းသိရင် ချက်ချင်းရေးတာပေါ့. ပထမရချင်လို့.
အခုတော့ ပထမ မရတော့မယ့်အတူတူ နောက်ဆုံးပဲယူ
ဖိုးစိန်ရေ... အများကြီးတွေးတတ် ၊ရေးတတ်ပါပေရဲ့.
အစ်မကတော့ မရေးနိုင်၊မတွေးနိုင်သေးဘူး ဖြစ်နေတာ.
မျောက်စိန် ရေးတွားတာ နာရေးဖို့တောင် ကျန်တော့ဘူး။
မကြီးနော် Tag ထားတာ ကိုမောင်ဟန် တစ် ပြန်ယူမယ်။။ နောက်ဆုံးကနေ ရေရင်လေ။ မကြီးဝါကို အဲ့ တစ် မပေးနိုင်ဘူး။
ဘ၀မှာ ဘာတွေပဲ ကြုံရ၊ ကြုံရ... အားလုံးက တဒင်္ဂတွေပါပဲ ညီလေးရေ။ ပျော်ရွှင်တာ၊ မပျော်ရွှင်တာတွေ အားလုံးက ဘ၀ဆိုတဲ့ အချိန်ပါးပါးလေးထဲ အားလုံး နစ်မြှုပ် ပျောက်ကွယ် သွားကြမှာ။
ညီလေး လိုအပ်တဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ ဂရုစိုက်ကြင်နာမှုတွေကို ညိလေးချစ်တဲ့ အကို၊ အမ၊ ညီ၊ ညီမ နဲ့ သူငယ်ချင်းများစွာ ဆီကနေ ရနေပြီပဲ။ အထီးကျန်တာတွေ၊ ၀မ်းနည်းတာတွေ၊ အားငယ်တာတွေ မဖြစ်နဲ့တော့။
အငယ်လေး နေကောင်းကျန်းမာဖို့၊ ညီလေးတို့မိသားစု အားလုံး ကိုယ်စိတ်နှစ်လုံး သုံးပါးစလုံး ကျန်းမာ ချမ်းသာကြစေဖို့ (ညီလေးရောပေါ့) ဆန္ဒမွန် ပြုပါတယ်။
ညီလေးတောင်းတဲ့ မန့် တရာ.....ကြိုးစားပြီးရေးပေးမယ်....ဘ၀ဆိုတာ...ပင်လယ်ရဲ့ .......သဘောထားနဲ့ တူတယ်လို့ နှိုင်းပြချင်တယ်.................အတက်ကျတွေရှိနေမယ်.....ကြမ်းတမ်းမယ်...............သိမ်မွေ့ မယ်....ပျော်ရွှင်စေမယ်..ငိုကြွေးရမယ်............ရယူနိုင်တယ်....ပေးဆပ်ရမယ်...ဒါကိုအခြေခံပြီး.........နားလည်သဘောပေါက်နှိုင်ပါစေညီလေးရေ...............ချစ်တဲ့ ကိုကြီး.....သုဒြေ္န
စိတ်ညစ်ရင် မောင်အီးဒူကိုသွား အူလှိမ့်အောင် ရီရလိမ့်မယ် အဟီး
စိန်ရေ ဘ၀ အမောတွေ ပျောက်ဖို့ ကိုယ်တိုင်သာစိတ်တင်းထားပါလို့ အမ ပြောနိုင်ပါတယ်၊စိတ်ချမ်းသာပါစေ၊ ညီလေးလဲ နေကောင်းပါစေနော်
ထင်တယ်။ ကိုဖိုးစိန်တယောက်အခုတလော ပျောက်ချက်တာကောင်းနေတာ။ ခုတလော စိတ်ညစ်တာ ပိုများနေတယ်နော့။
တောင်းဆုလေးပြည့်ပါစေ။ ကျန်းမာရေးဂရုစိုက်ဦး သူငယ်ချင်းရေ။
ကွန်းမန့်အခု၁၀၀ ရမှ ရေးမယ်ဆိုတာမျိုး မလုပ်ပါနဲ့ဗျ။ ကျနော်က အမြဲနောက်ကျမှ ဖတ်ဖြစ်ပေမယ့် ( ဒျူတီရှိတာကိုး ) ကိုဂျီးအိမ်ကို ကြည့်လိုက်လို့ အသစ်မတွေ့ရင် .. ရင်ထဲ ဟာတာတာနဲ့ ဘယ်လိုကြီးလဲ မသိဘူး။
အဲ့လို တူများတွေကို မနှိပ်စက်ရဘူးလေ။ ရေးပါဗျ။
ဒီပိုစ့်ကို ကျနော် အလုပ်က ပြန်ရောက်ပြီး ထမင်းစားရင်း ဖတ်တာ မစားမိပဲ ထမင်းပန်းကန် ဘေးချထားရတဲ့အထိ ရင်ထဲ မကောင်းဖြစ်သွားတယ်။ =(
စိတ်ညစ်ခဲ့ရတဲ့ မနေ့က တနေ့က ကိစ္စတွေ
မလှပတဲ့ အတိတ်ကို သတိတရနဲ့ သယ်သွားနေမယ်ဆိုရင် ဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးဖြစ်တတ်တယ်။
စိတ်ညစ်နေတဲ့ နေ့တွေလို့ မှတ်တမ်းတင်ထားရမှာ နှမြောစရာကြီး...
မနက်ဖြန်တိုင်းနဲ့ လက်ရှိ အချိန်တွေကို အကျိုးရှိအောင် ဖန်တီးပီး ပျော်အောင်နေပါ....
မိသားစုနဲ့ အဝေးမှာ တစ်ယောက်တည်း...
မျက်ရည်တွေနဲ့ အချိန်တွေ မဖြုန်းပါနဲ့...
ဖြစ်နေတဲ့ အပေါ်မှာ အကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင် ကြိုးစား နေကြည့်လိုက်ပါ....
ညီ့ထက်ပိုပြီး အဆင်မပြေ စိတ်ဆင်းရဲနေရတဲ့သူ ရှိသေးတယ်..း(
ချစ်ခင်သူတွေ အများကြီး ရှိနေတယ်ကွ စိတ်ဓါတ်မကျကြေး
ကိုယ်.ကိုယ်ကိုအရမ်းသနားတတ်တဲ.လူက စိတ်မချမ်းသာဘူး ဘယ်တော.မှ လည်ပျော်ရွင်မှာမဟုတ်ဘူး ။ငါ.ကို ငါကခံလိုက်ရတာ ။ငါ.ကိုမုန်းကျတယ် ..
ငါဟာအစွန့်ပစ်ခံရသူ၊ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ညံ့တယ်လို့ ခံစားမိရင်လည်း မကောင်းဘူး ။ လောကမှာနေရာ ၁ ခုရောက်လာပြီ ပိုကောင်းတဲ.နေရာရောက်ချင်ရင်ကြိူးစားရုံပဲ .မောရင်နားလိုက်ကြိုးစားလိုက်နဲ.သွားရတာပဲ။
ခေါင်းကိုက်တယ်ဆိုလို.ပြောရအုံးမယ် Vista လည်းခေါင်း ၁ခြမ်းကိုက်တာပဲ အသေကိုက်တာနော် အခုဆို နခေါင်းသွေးတောင်ယိုနေပြီ ။ဘာမှစိတ်မညစ်ပါဘူး ဒီလိုပဲ ပျော်အောင်နေတယ် ။ခေါင်းကိုက်လို.စိတ်တိုလို.ကတော.ရူးလိမ်မယ် .သူများခံစားချက်တွေအမြင်တွေလည်းအရမ်းဂရုမစိုက်နဲ.
” တရားထိုင်ကြည်.ပါ ” ၁ နေ.ကို ၅ မိနစ် ၁၀ မိနစ်လောက်ထိုင်ပြီးကိုယ်စိတ်ကိုပြန်ပြန်ကြည်.ပေး အရမ်းအကြိုးရှိပါတယ် .စမ်းကြည်.ပါ
ပြောသွားတာကစုံနေတာပဲး)ဖတ်ရတာမောလိုက်တာ ပေးပါရေအေးအေးလေးတခွက်
၅ ခါလောက် ပြန်ကြည့်သွားတယ်
အကိုရေ အခုတလောလေး လာဖတ် သွားတယ်